Bangiga Dhexe Ee Soomaaliya badbaado mudan yahay? – Idil News
June 26, 2019 | VIDEO: Madaxweyne Farmaajo “Waxaan xalinaynaa Tabashada Somaliland”
June 25, 2019 | Video:-Madaxweyne Deni oo hanbalyo ka diray 26-ka June
June 25, 2019 | Toyota oo soo dagaysa Puntland iyo Aaran-jaan oo isku haysta qandaraaska
June 25, 2019 | Suldaan Garaase ka feejignoow hagardaamada Aaran-jaan!!
June 25, 2019 | Gudiga amniga Ee Baarlamaanka Puntland oo ku hor ceeboobay golaha
Bangiga Dhexe Ee Soomaaliya badbaado mudan yahay?
Posted By: Jibril Qoobey January 12, 2019
Waxyaabaha uu ku caanbaxay Madaxweyne Md. Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) waxaa ka mid ah halku dhigga qiimaha badan ee ah “Soomaaliya Soomaali baa leh” oo macnaheedu yahay maamulka, difaacidda, iyo kheyraadka dalka waxaa iska leh, una madaxbanaan go’aankooda, xilna uu ka saaran yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Sidey marka ku dhacday in RW Md. Xasan Cali Kheyre uu ku adkaysto in nin u dhashay dalka UK (ama bilcaan Masriyad ah) loo dhiibo hoggaanka Bangiga Dhexe ee Soomaaliya? Waxaa foolxumo ah in 60 wasiir iyo wasiir ku xigeeno Soomaaliyeed ay madaxa u raariciyeen RW Kheyre oo ka ogolaadeen in la badelo Sharciga Bangiga Dhexe Lambar 130 ee 2011 (waxna laga badelay 4/4/2012), Qodobkiisa 12aad, Farqaddiisa 1aad, Xarafka (a) ee dhigaya in Guddoomiyaha, Guddoomiye Ku Xigeenka, iyo 5ta xubnood oo kale ee Golaha Agaasimayaasha (Board of Directors) ay ahaadaan muwaadiniin Soomaaliyeed.
RW Kheyre ayaa olole weyn ugu jira in uu nin saaxiibkiis ah oo la yiraahdo Mr. Nigel Roberts oo ka soo shaqeeyay hey’ado gargaar uu ka dhigo Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Ee Soomaaliya waana talaabo ihaano ku ah aqoonyahanada, qurbajoogta Soomaaliyeed ee dadaal badan iyo lacag badan ku bixiyay sidii loo dooran lahaa MW Farmaajo. Waa talaabo adkeyn doonta wadashaqeynta iyo isfahamka Bangiga Dhexe iyo bangiyada ka jira Soomaaliya oo ah bangiyo islaami ah oo ku dhaqma shareecada Islaamka ee bangiyada.
In ajnabi loo magacaabo Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, waxay ku noqon doontaa MW Farmaajo dhacdo foolxun oo baal madow ka gasha taariikhdiisa siyaasadeed.
Waxay noqon doontaa dhacdo xun oo aqoonyahanada iyo qurbajoogta Soomaaliyeed ay muddo dheer ka sheekeeyaan. Waa tan taariikhda Mr.
Roberts: Waxaa dalbaday jagada Guddoomiyaha Bangiga Dhexe oo weliba wareysi shaqo laga qaaday aqoonyahano badan oo Soomaaliyeed oo khibrad u leh maamulka maaliyadda, bangiyada islaamiga ah iyo kuwa cilmaaniga ah. Waa xadgudub weyn in, iyada oo la heli karo Soomaali qaban karta shaqadaas, la badelo sharciga Bangiga Dhexe ee Soomaaliya si loo keeno nin la saaxiib ah RW Kheyre oo ajnabi ah oo aan weligiisna la shaqeyn bangi ku dhaqma shareecada islaamka.
Baaq Ku Socda MW Farmaajo, RW Kheyre, Xildhibaanada Golaha Shacabka, Iyo Xisbiyada Siyaasadeed ee Dalka Qorshaha xowliga ku socda ee ah in qof ajnabi ah loo magacaabo jagada Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya waxay dhaawici doontaa dareenka wadaninimo ee dhalinyarada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Waxay hoos u dhigi doontaa kalsoonida ganacsatada Soomaaliyeed iyo in ay maalgashtaan dalka. Waxay ku dhali doontaa qurbajoogta Soomaaliyeed in aysan ku soo degdegin dib ugu soo laabashada dalka. Mudane RW Kheyre, ka joog ajnabi jacaylka. Ha nooga eexan gaalka saaxiibkaa ah.
Ma dhici doonto in aan aqbalno ajnabi Xamar noogu taliya (Mudane ma iloowday Nicholas Haysom?) ama taageerno ama la shaqeeyno ajnabi madax ka ah Bangiga Dhexe. Mudane MW Farmaajo, waxaad ku caanbaxday oo badankeen aan kugu taageernay difaaca qaranimada iyo sharafta dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Md. Madaxweyne, fadlan ka hortag oo gaashaanka u daruur qorshaha guracan ee ah in qof ajnabi ah madax looga dhigo Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo ah bangi ay bulshadu aad u qadariso (kuna caan baxay silsiladdii weyneyd) oo maamuli doona lacagta iyo suuqyada maaliyadda ee Soomaaliya. Mudane Madaxweyne, waxaa jooga rag iyo gabdha Soomaaliyeed oo si hufan uga soo bixi kara hoggaaminta Bangiga Dhexe. Mudane MW, looma baahna, kamana mid ah qodobada deyn cafinta ee SMP in aan qof ajnabi ah gacanta u galino maareeynta howlaha maaliyadda iyo dhaqaalaha dalkeena.
Waxaa loogu baaqayaa Xildhibaanada Soomaaliyeed iyo Madaxda Xisbiyada Siyaasadeed ee sharafta leh in aysan gudbin hindisa sharciyeedka uu wato RW Kheyre ee ah in sharciga Bangiga Dhexe ee Soomaaliya wax laga badelo si uu u shaqaaleysiiyo saaxiibkiis oo ajnabi ah. Arrinkan waa ceeb wuxuuna qiil u noqon doonaa in jagooyin kale loo dhiibo ajnabi iyada oo la heli karo Soomaali qaban karta shaqada.
Waxaa soo dhow xilli doorasho ee ha loo eexdo shaqaalaha Bangiga Dhexe, aqoonyahanada, khubarada, xirfadlayaasha, maamulayaasha bangiyada iyo culimada Soomaaliyeed oo yaan loo dhiibin hoggaanka Bangiga Dhexe shaqsi ajnabi ah oo aan weliba muslim aheyn.
Bangiga Dhexe waa hey’ad muhiim u ah maareynta maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka waana joogaan dad Soomaaliyeed oo u qalma in ay madax ka noqdaan. Haddii aadan hureyn oo aad jeceshihiin ajnabiga, waxaad ka dhigan kartiin Lataliyayaal inta doorshada soo socota laga gaarayo.